Belt nke Orion: kedu ihe ọ bụ, njirimara, akụkọ mgbe ochie na nebulae | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 04/10/2021 17:45 | Astron
El Belt nke Orion ọ bụ ụyọkọ kpakpando, ya bụ, otu kpakpando na -etolite ọnụọgụ geometric na ahịrị na -emepụta eriri pụrụ iche. Otu egwu a nwere kpakpando atọ jikọtara ọnụ, akpọrọ Alnitak, Alnilam, na Mintaka. Ha dị n'etiti Orion n'ụdị onye dinta. Maka ndị Gris nke a bụ eriri Orion, maka ndị Arab ọ bụ olu olu pearl. Ndị Ijipt chere na ha bụ ọnụ ụzọ ámá nke eluigwe. Ndị Mayan na -akpọ ha nkume atọ nke stovu. Ugbu a enwere atọ na Mexico na akụkụ ndị ọzọ nke Latin America Eze anwansi ma ọ bụ maries atọ.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara eriri Orion site na ụfọdụ ịmata ya.
2 Igwe kpakpando belt nke Orion
3 Akụkọ na akụkọ mgbe ochie nke eriri Orion
Belt nke Orion bụ otu kpakpando nke so na ìgwè kpakpando Orion. A na -akpọ ya eriri n'ihi na ọ bụ akụkụ nke onyinyo dinta na Orion. Kpakpando atọ jikọtara ọnụ nke mejupụtara eriri Orion ka amara n'ụwa niile dịka Las Tres Marías ma ọ bụ Tres Reyes Magos, aha ha bụkwa: Alnitak, Alnilam na Mintaka. Fọdụ n'ime njirimara ya bụ ndị a:
Mba Equatorial nwere ike ịhụ ụyọkọ kpakpando a n'afọ niile.
Ọ mejupụtara kpakpando atọ, n'ụdị nke ahịrị kwụ n'ahịrị, nke nwere eriri mgbagọ agbagọ.
A na -akpọ kpakpando ndị mejupụtara ya: Alnitak, Alnilam na Mintaka.
Ha dị na Milky Way, afọ ọkụ 915-1359 site na ụwa.
Ọ bụ nke Orion.
Igwe kpakpando belt nke Orion
Ndị a bụ kpakpando kachasị mkpa na eriri Orion:
Alnilam: Ọ bụ nnukwu kpakpando na -acha anụnụ anụnụ nke dị n'etiti kpakpando atọ dị n'úkwù Orion. O nwere akụkọ ihe mere eme nke nde afọ 4 ma bụrụ nke na -enwu gbaa na nke kacha dị anya na eriri. Ibu ya dị okpukpu iri anọ nke anyanwụ na okpomoku elu ya bụ 40 ºC. A na -eme atụmatụ na ọ ga -abụ onye na -acha ọbara ọbara.
Alnitak: Ọ nwere akụkọ nde afọ isii na oke ya bụ ugboro 6 nke anyanwụ. Ọ bụ narị afọ asaa site na anyị. Ihu igwe ya na -agbada gburugburu 16 ° C, ekwenyere na ọ ga -emecha bụrụ kpakpando na -acha ọbara ọbara.
Mintaka: Ọ bụ nnukwu kpakpando na -acha anụnụ anụnụ nke nwere kpakpando abụọ ọnụọgụ abụọ, ọ na -enwu gbaa nke ukwuu, nke nwere okpukpu iri abụọ nke Sun na elu okpomọkụ nke 20 ºC. Ọzọkwa, ọ bụ naanị kpakpando ka enwere ike ịhụ site n'Ebe Ugwu na Ndịda South.
Belt Orion dị na ụyọkọ kpakpando Collinder 70 dị n'etiti ụyọkọ kpakpando Orion, afọ ìhè 915-1359 site na ụwa. Nke a n'aka nke ya nọ na mbara igwe. Enwere ike ịhụ ya n'akụkụ ire ọkụ Nebula na Horsehead Nebula akpọ Alnitak. Na mgbakwunye, ìgwè kpakpando nke Eridanus dị nso, ya na Taurus na Can Major na Minor. Belọ Orion bụ nke otu kpakpando Orion, ọ bụ kpakpando kachasị mkpa na ama ama na mbara igwe, ọ bụkwa ya bụ ụyọkọ kpakpando kachasị ukwuu na nke na-enwu gbaa na ụyọkọ kpakpando anyị.
Akụkọ na akụkọ mgbe ochie nke eriri Orion
Dị ka mmepeanya oge ochie ndị ọzọ nke jikọtara ụlọ na Orion, ndị Ijipt jikọtara kpakpando Orion ha na pyramid ha na Giza. Vortex nke pyramid ahụ metụtara kpakpando ọ bụla. Ndị Ijipt kwenyere na eriri Orion bụ ọnụ ụzọ nke eluigwe, na chi nke zutere ndị nwụrụ anwụ bụ dinta si Orion, yabụ ha liri ndị Fero na pyramid ndị a.
Ọdịbendị oge ochie ọzọ nke jikọtara pyramid ahụ na kpakpando n'úkwù Orion bụ mmepeanya Mexico, nke dị na mkpọmkpọ ebe nke Teotihuacan.
Ndị amamihe atọ: Ọtụtụ ndị mmadụ na -ejikọ kpakpando atọ nke eriri Orion na ndị amamihe atọ (Melchior, Gaspar, na Balthazar) ndị si ọwụwa anyanwụ gaa izute Onye nzọpụta Jizọs wee nye ya igbe ọla edo atọ iji nye.
Mary atọ: A na -akpọ kpakpando nke eriri Orion Tres Marías iji sọpụrụ María, Marta na Margot. N'oge alaeze La, ụmụ nwanyị atọ nwere akpụkpọ anụ ọcha, ntutu dị nfe na anya na -acha anụnụ anụnụ rutere n'ụsọ oké osimiri Mexico. Ndi aborigine nwere akpụkpọ ojii nabatara ụmụnwaanyị ndị a. Maria mụrụ nwa nwoke aha ya bụ Izus. Ndị hụrụ Ra n'anya wakporo ha. Ọ bụ maka ha ka ha gbagara n'agwaetiti Iberian, ebe Maria guzobere Toledo na Marta guzobere Sara Gossa na Barcelona, ​​Margot guzobere Jatiwa.
Ka oge na -aga, Marta gara n'ikpere mmiri nke Great Britain wee banye na mpaghara Europe, guzobe Berlin, Warsaw na Amsterdam ruo mgbe ọ rutere Moscow wee nwụọ n'ebe ahụ. Nke abuo, Maria na Margot ya na Izus hibere nnukwu obodo na mpaghara Amazon akpọ El Dorado. N'ikpeazụ, ha rutere Iran na India, ebe Margot na onye isi alaeze Ra nwere nwa nwoke si Buddha ma ọ bụ Tao.
Orion Nebula bụ otu n'ime ihe ndị a na -ahụkarị ma na -ese foto na mbara igwe abalị, ọ bụkwa otu n'ime ihe ndị kacha amụ ihe na mbara igwe. Nebulae na -ekpughe ọtụtụ ihe gbasara etu kpakpando na sistemụ mbara ala si kpụọ site na mgbada nke igwe ojii na uzuzu.
Nebula Horsehead bụ akụkụ nke igwe ojii kachasị na Orion. Ọtụtụ n'ime akwụkwọ akụkọ ndị a na -eji nebula n'ụdị igwe ojii gbara agba nke na -enweghị ike ịgabiga. Ndị ọzọ na -eche na enwere ọtụtụ kpakpando na mbara ala n'ihu ime ime, ọkachasị n'azụ nebula.
Flame Nebula bụ nebula na -agbapụta agbapụ nke dị na ụyọkọ kpakpando Orion. Nebula dị 1.350 afọ ọkụ dị anya site na Earth ma nwee oke nke pụtara 2. Flame Nebula nwere oghere dị nkeji iri atọ nke mbara igwe. Ọ bụ akụkụ nke nnukwu mpaghara kpakpando, ọ bụ igwe ojii igwe ojii Orion.
Flame Nebula bụ ụyọkọ nke narị narị kpakpando na -eto eto, 86% nke ha nwere diski okirikiri. Ndị otu ọdụdụ na -anọkarị n'etiti etiti ụyọkọ, ebe a na -ahụ ndị kacha okenye na mpaghara dị na mpụga.
Enwere m olile anya na site na ozi a ị ga -amụtakwu gbasara eriri Orion na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Belt nke Orion